Semalt: Indlela Yokunqanda Umthumeleli Wentengiso - Iingcebiso eziqhotyoshelweyo zokukhumbula
Ukuqhuba iblogi okanye iwebhusayithi ye-e-commerce yinto ezuzayo nevuzayo enika amathuba amaninzi okukhula kwamashishini kunye nokudala amathuba. Nangona kunjalo, ezininzi idiots zizama ukutshabalalisa iinkampani ze-intanethi kwaye zidale izithintelo kubo bonke ngaphandle kwesizathu esithile. Abafuni ukwenza nto ngaphandle kokudala umonakalo, kunye nabagaxekile be-spammers ngabanye babo. Kukhuselekile ukuthetha ukuba abagxeki be-spammers kunye nabahlaseli beengcali zegraffiti kwi-intanethi abasoloko befuna ukushiya amanqaku angabhalwanga kwi-intanethi.
Ukuba uhlola i-akhawunti ye-Google Analytics kwaye ubone ukwanda kwabakhenkethi kwiiwebhsayithi ezingaziwa, kukho amathuba okuba iwebhusayithi yakho ijoliswe kuyo, kwaye kufuneka uthabathe amanyathelo ngokukhawuleza. Iiwebhsayithi ezithumela ugaxelo logalelo luyi-hulfingtonpost - web application development firms.com, priceg.com cenoval.ru, kunye ne-bestwebsitesawards.com. Ingangomva engaqondakaliyo, kodwa abaninzi bewebhu kunye neeblogger abanalo ngcamango yokuba iindawo zabo zifumana iimbonakalo ezibuxoki, ezininzi zazo zivela kumasayithi esachazwe ngasentla.
Ngenhlanhla, uMax Bell, uMphathi weNtengo kaMthengi we-15 (Semalt , unika apha iindlela zokubasela ezo ziza kunye nokuyeka izithuthi zabo ekuphazamiseni amabhizinisi akho kwi-intanethi.
Sebenzisa ifayile ye -htaccess yokulwa nogaxekile
Ukuba isayithi lakho ligcinwe nge-Apache webserver, kufuneka uhlaziywe..fayile ye htaccess. Indlela efanelekileyo kukukhusela ifayile ye -htaccess ukuba ingabandakanyi abagaxekile kunye neebhokhwe ezimbi. Ungakwazi ukuwahambisa kwakhona kwi-Apache okungenakuba lula ngabo ukuba baqikelele.
Izihlungi zeGoogle Analytics
Kwiimeko ezininzi, abagaxekile kunye nebhodi zabo abayi kubuya kwiwebhusayithi yakho. Kwiimeko ezinjalo, kufuneka uvalise le bots kunye nokuzibuyisela kumawebhusayithi abo ngokufaka iikhowudi ezikhethekileyo kwi-akhawunti ye-Google Analytics. Unokwenza kwakhona izihlungi kwiprofayili yakho ye-Google Analytics, kwaye iya kunceda ukuphucula umgangatho wezithuthi zakho. Ngethamsanqa, i-Google Analytics inikezela ezininzi iinkonzo zokuphelisa abagaxekile kwiinkcukacha ze-analytics kunye neengxelo. I-downside kuphela yale nkqubo kukuba ayiyi kufakwa kuzo zonke iiwebhu kwixesha elifanayo.
Qwalasela ngokucwangcisiweyo Ukucoca i-Bot
Unokuqwalasela ngesandla ukucoca ukucoca. Kule nto, kufuneka uhambe kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics uze wenze iFree Filter. Khetha ukhetho oluKhethekileyo uze ufake ikhowudi ethile kuloo.
Ukukhusela idilesi ye-IP Referrer spam
Unokubamba lula ukuba idilesi ze-IP zokuthumela i-spam. Ndiyathanda inyathelo lokuthintela izithuthi ezivela kwi-IPs engaziwa. Kufuneka uqinisekise ukuba ukufikelela kwabagaxekile kubanjwe kwiwebhusayithi yakho ngale ndlela.
Uluhlu lokuxhoma kwe-Google Analytics IP
Isinyathelo esilandelayo kukuqinisekisa ukuba ulondoloze uluhlu lokungabikho kwe-Google Analytics IP. Kubalulekile ukukhumbula ukuba awukwazi ukufumana iziphumo ezilungileyo kunokuba ungakhange ulukhuphe olu luhlu. I-Google Analytics inika inani elikhulu lokukhetha ukukhupha uluhlu kwaye uvimbele iiliti ze-IP. Ungakhetha ukhethe kwaye ufake ifayile kwiwebhusayithi yakho, uqinisekise ukhuseleko olupheleleyo kunye nokukhuselwa.